TTSweet: မနက်စာ ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ ပဲပြုတ် ...
မနက်စာ ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ ပဲပြုတ် ...
စီဘောက်စ်မှာ ပဲပြုတ်အကြောင်းမေးထားတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးတင်ဖို့ သတိရသွားတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မနက်စာ အိမ်မှာ ကောက်ညှင်းပေါင်း စားကြတယ်။
စားတော်ပဲကို တစ်ညရေစိမ်ပါတယ်။ မနက်ကျတော့ ရေစစ်ပြီး အညှောက်ကလေးတွေ ထွက်လာတဲ့ အထိ ၃-၄ ရက်လောက် ရေစိုဝတ်လေး အပေါ်ကနေ အုပ်ထားလိုက်တယ်။ ရေလဲ နဲနဲ စွတ်စွတ် ပေးရပါတယ်။
အပ်ချလောင်း ... အညှောင့်လေးတွေ ထွက်လာပါပြီ ခင်ညာ။
ပဲကို မပြုတ်မီရေဆေးရပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ အရင်က Slow cooker နဲ့ ပြုတ်ပါတယ်။ ရေကို ပဲနဲ့ ရေပြင်ညီထည့်၊ ဆိုဒါ၊ဆား နဲနဲထည့်၊ ထန်းလျက်ခဲလေး ၂ခဲထည့်ပြီး ပြုတ်တယ်လို့ ကြီးတော်က ပြောပါတယ်။ နာရီဝက်တစ်နာရီလောက် ပြုတ်ရပါသတဲ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတော့ ထမင်းပေါင်းအိုးအပေါ်က ပေါင်းချောင်နဲ့ ပေါင်းပါတယ်။ သကြား၊ဆား၊ ဆိုဒါထည့်ပေါင်းပါတယ်။ ထမင်းပေါင်းအိုးက အငွေ့လုံလို့ နာရီဝက်လောက်ပဲပေါင်းရပါတယ်။
ပဲပြုတ်ကို ပထမတစ်ရက် ကြိုပေါင်းပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
မနက်ရောက်တော့ ဖက်ကလေးခင်းပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးက ပေါင်းချောင်နဲ့ပဲ ပေါင်းပါတယ်။ အပေါက်တွေက ကောက်ညှင်းဆန်တွေ ထွက်ကျမှာကြောက်လို့ ခင်းရတာပါ။ ကောက်ညှင်းလဲ ဖက်နံ့လေး မွှေးသွားတာပေါ့။
ကောက်ညှင်းနဲနဲကျက်သွားပြီဆို အငွေ့ဝင်အောင် အပေါက်လေးတွေကို တူလေးနဲ့ ထိုးပေးရသေးတယ်။
အငွေ့တထောင်းထောင်း ကောက်ညှင်းပေါင်း ပူပူနွေးနွေးရပါပြီ ခင်ညာ။ နာရီဝက်လောက်ပဲ ပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။
အိမ်မှာရှိတဲ့ ငါးခြောက် အာဗြဲခြောက်ကို မီးကင်၊ နှမ်ထောင်းကိုဆားနဲ့ရော၊ ပဲပြုတ်ပူပူနဲ့ ဆီရွှဲရွှဲ ကောက်ညှင်းပေါင်း မနက်စာကတော့ နတ်သုဓါနဲ့တောင် မလဲနိူင်ပါဘူးဗျာ။
မနက်စာကောက်ညှင်းပေါင်း ပူပူနွေးနွေး စားကြပါဦးရှင်။
ငယ်ငယ်က ဒီဇင်ဘာ အားကစားလတွေမှာ ပြေးလွှားလို့ မောနေတဲ့အချိန် လာဝေတဲ့ ကောင်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ငါးခြောက်ကြော်ကို သတိရသွားတယ်။ ငှက်ပျောဖတ်နဲ့ ထုတ်ပြီး လိုက်ဝေတာဗျာ။ အဲဒီတုံးက ကောက်ညှင်းပေါင်းကလဲ ဆာဆာနဲ့ စားလို့ကောင်းလိုက်တာ ... တစ်သက်မမေ့ဘူး။
ကိုအနောနိမတ်စ်မှ မေးလာလို့ ကောက်ညှင်းထဲ ထည့်ပြုတ်တဲ့ ပဲ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းထဲ တစ်ခါထဲ ထည့်ပေါင်းတဲ့ ပဲက ပဲလွမ်းပါ။ ပဲလွမ်းက နီညိုရောင်ရယ် အဖြူညစ်ညစ်လေးရယ် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို cow peas လို့ ခြုံငုံပြီးခေါ်ပါတယ်။ အနီလေးကို red cow peas, အဖြူလေးကို black eye peas လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။
အဲလိုတော့ တစ်ခါမှ ပေါင်းမပြုတ်ဖူးသေးဘူး။ နောက်မှ စမ်းကြည့်ဦးမယ် အနောနိမတ်စ်ရေ။
Posted by T T Sweet at 10:13 AM
Labels: (၂ ၀၀) မြန်မာ မုန့်သရေစာများ***, (၂- ၃ ) ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ ပဲပြုတ်
မြူးမြူး October 9, 2010 at 11:23 AM
ရက်စက်ပါပေ့ မမဆွိရယ်.. မနက်ရုံးရောက်ရောက်ချင်း ကြည့်မိလိုက်တာ.. ခုတော့ သွားရည်တွေ မနည်းထိန်းနေရတယ်.. :)
Gyidaw October 9, 2010 at 11:53 AM
Wow!!!!!!!!!!!!Want to have alllllllllllllllof ur breakfast.Where can i get complete course in GENEVA?
Vista October 9, 2010 at 11:56 AM
တီဆွိလက်ရာက ကောက်ညင်းမကြိုက်တဲ့လူတောင် စားချင်သွားတယ်
အုန်းပြန်ပေါင်းလား အဲလိုခေါ်တာမှန်လားမသိ အဲဒါတော့ကြိုက်တယ် အုန်းသီးနဲ့ လေ ..
ကျော်နှင်းဆီလွင် October 9, 2010 at 1:29 PM
မ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာရေထည့်လား ဘယ်လောက်ထည့်လည်း ပြောပြပေးပါလားဟင်
မ လုပ်တာကြည့်တာ ရှင်းတယ်နော် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ..
T T Sweet October 9, 2010 at 2:22 PM
ရေကိုဆူပွက်နေအောင် အပြင်မှာ အရင်တည်ပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်ပါတယ်။ အပေါ်က ပေါင်းချောင်ကို ရေမထိစေပါနဲ့။ ပေါင်းအိုးနဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဆို ရေငွေ့တော်တော်ရပါတယ်။ ရေငွေ့များလေ ပေါင်းရတာမြန်လေပါပဲ။
khin oo may October 9, 2010 at 2:55 PM
သက်ဝေ October 9, 2010 at 3:32 PM
ကိုပေါ October 9, 2010 at 3:50 PM
အန်တီဆွိ... စင်္ကာပူအနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချမယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူ အားပေးမယ့် ပရိတ်သတ်ရှိတယ်ဗျိုး။း-)
ဒါထက် ဦးရှိမ့်ရဲ့ ရှစ်ရှစ်က တူကိုယ်တိုင်ရဲ ဂျကားအပီဘူးနဲ့ တူရယ်။
“ရေလဲ နဲနဲ စွတ်စွတ် ပေးရပါတယ်။” ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်က “ဆွတ်ဆွတ် ပေးရပါတယ်” လို့ ပြောရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ကျနော်သိသလောက်တော့.... လူကပြုလုပ်တာကို ပြတဲ့ ကြိယာအနေနဲ့ဆိုရင် ဆွတ်ဖြန်းသည်။ ရာသီဥတု၊ စိုထိုင်းဆ စသည်ရဲ့ အနေအထားကို ပြောမယ်ဆိုရင် စွတ်စိုသည်။ ..........။
Anonymous October 9, 2010 at 5:17 PM
subuueain October 9, 2010 at 8:18 PM
တီဆွိ နည်းလေးနဲ့ပေါင်းစားဦးမှဘဲ။ ညီမက ပေါင်းအိုးထဲထည့်ချက်တော့ ကောက်ညင်းချက်ဖြစ်နေရှာတယ် :)
nyimuyar October 9, 2010 at 10:47 PM
ပဲကို အဲ့ဒီလို ၃ ရက်လောက်စိမ်လိုက်တာ အနံ့တွေ ဆိုးသွားလို့ ဗျာ၊ ရေခဏခဏ လဲ ပေးရသေးလား။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 9, 2010 at 11:02 PM
T T Sweet October 10, 2010 at 2:27 AM
ကိုကြီးကျောက် ဘယ်လောက်ဖိုးထည့်ရမတုံးတော့ ...း))
ကိုညီမူယာ ဟုတ်တယ် ၂ခါလားမသိဘူးပြုတ်တာ နံဖူးတယ်။ လုပ်နည်းက အကုန်အတူတူပဲကို။ ပဲကို လက်မသန့်တာနဲ့ ကိုင်မိလို့ အချဉ်ပေါက်ချင်တာလားမသိဘူးနော်။ ပဲကို ရေစိမ်ပြီး ရေစစ်၊ရေဆေးရသေးတယ်နော်။ မေ့နေလို့ အပေါ်မှာပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။
ကိုပေါပြောမှပဲ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ သိတော့တယ်။ သတိကို မထားမိဘူးဗျာ။
အန်တီသက်ဝေကတော့ တွေ့ရင်ချောင်းရိုက်မယ်တဲ့။ ဗလတောင့်တဲ့ အန်တီကွန်းကို အားကိုးနေရတယ်း))
~ဏီလင်းညို~ October 10, 2010 at 2:54 AM
(ကောက်ညှင်းကို အဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်မှာတင်ပြီး....အဖုံးပိတ်ထားရုံပဲလားခင်ဗျာ....။ လုပ်စားချင်စိတ်ပေါက်သွားလို့......း))
Anonymous October 10, 2010 at 3:11 AM
အလုပ်တွေတအားနဲ့ များနေတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်တာ။ အခုတော့ မဆွိကို လွမ်းလို့ လာချောင်းတာလေ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ တည့်တည်းတိုးလို့ စားသွားပြီ..း))
ဘယ်သူလဲ သိတယ်ဟုတ် _(*0^)_
T T Sweet October 10, 2010 at 3:38 AM
အပေါ်က အနောနိမတ်ရေ ... မဆွိ၊ မဆွိနဲ့ ခေါ်တာ လသာလား၊ အကြည်လား မသိဘူးတော်။ လေသံတွေကတူနေတော့ ခွဲရခက်တယ်။
လာသာညဆ်ိုရင်တော့ ၀ရမ်းပြေးကို ဖမ်းရမယ်။ ဘလော့ကို ရှာလို့ကို မရတော့ဘူး။
ကိုဏီလင်းညိုရေ ... ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ ရေထည့်ပြီး အပေါ်က ပေါင်းချောင်လေးနဲ့ ပေါင်းပါတယ်။ ရေအရင်ဆူအောင် အပြင်မှာတည်ပြီးမှထည့်ရင်တော့ မြန်တာပေါ့ဗျာ။ အဲလိုထမင်းပေါင်းအိုးက ပေါင်းချောင်လေးနဲ့ဆို လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။
Anonymous October 10, 2010 at 7:25 AM
ပဲစေးငုံ ကို english လို ဘယ်လိုခေါ် လဲ ဟင်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း ထဲ ထည့် ပေါင်း တဲ့ ပဲ က ဘာပဲလဲ ဆိုတာလဲ ပြောပြပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါနော်
tin min htet October 10, 2010 at 9:39 AM
ရှဲ့ရှဲ့ .. တီတီဆွိ
ပဲကို ထမင်းပေါင်းအိုးက စကာနဲ့ ပေါင်းလို့ရတာကို လုံးဝ စိတ်ကူးမပေါက်ဖူး။ ဒီတိုင်းထည့်ချက်လိုက်တော့ စားလို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ မလှတော့ဘူး။ စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ (စားတော်ပဲက ရန်ကုန်ကို မှာရင် အညှောက်ဖောက်ပြီးသားကို ပြန်ခြောက်ထားတဲ့ အထုတ်လေးတွေရှိတယ်။ ပိုလွယ်တာပေါ့)
ကျော်နှင်းဆီလွင် October 10, 2010 at 2:33 PM
T T Sweet October 10, 2010 at 3:13 PM
အနောနိမတ်စ်ရေ ပဲစင်းငုံကို pigeon peas လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းထဲ တစ်ခါထဲ ထည့်ပေါင်းတဲ့ ပဲက ပဲလွမ်းပါ။ ပဲလွမ်းက နီညိုရောင်ရယ် အဖြူညစ်ညစ်လေးရယ် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို cow peas လို့ ခြုံငုံပြီးခေါ်ပါတယ်။ အနီလေးကို red cow peas, အဖြူလေးကို black eye peas လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်မှာလဲ အဆင်သင့်ရှိနေလို့ အပေါ်မှာ ပုံလေးတင်ပေးထားလိုက်မယ်။
ကိုကိုထက် ... အဲဒီပေါင်းအိုးက မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားဗျ။ အိမ်မှာလဲ ၀ယ်ပြီး ၃နှစ်လောက်မှ သိတာ။ မကြာသေးဘူး။
ကိုကျော်နှင်းဆီလွင်ရေ (ဟမလေးမောလိုက်တာ ရေတစ်ခွက်း) )နောက်တာနော်။ ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့သူတွေကလဲ ခုလိုလာလည်တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။
Anonymous October 11, 2010 at 2:30 AM
hote, thanksalot ma ma sweet.
ဖိုးတုတ် October 12, 2010 at 8:00 PM
ကောက်ညှင်းပေါင်းလုပ်နည်းကတော့နည်းနည်းမြင့်တယ် ကျွန်တော့်အနေနဲ.တော့မလုပ်တတ်ဖူး အုန်းထမင်းတောင် အလုပ်မအားလို.မချက်ဖြစ်သေးဖူး အကောင်းဆုံးနည်းက ဒေါ်တီတီဆွိတို.မိသားစုနဲ.ခင်အောင်ပေါင်းပြီး အမချက်တာတွေလာစားရင်ကောင်းမလားလို.
Anonymous October 19, 2010 at 6:27 PM
thank u for pae pyout recipe.i will do it.i miss my home town.
Moe Cho Thinn October 21, 2010 at 9:43 AM
သူတို့ လုပ်ပြတော့လဲ လွယ်လိုက်တာ။ ဒီမှာက လုပ်တိုင်းမဖြစ်လို့ ငိုချင်တာပဲ သိတယ်။ ပြုတ်ပြီးသား ပဲပြုတ်တောင် ပူအောင် ပြန်နွှေးတာ ကွဲထွက်သွားလို့.. :(
ကြည်မြန်မာ June 10, 2011 at 4:43 AM
စားတော်ပဲက ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်း မသိဘူးခင်ဗျ..။ တီဆွိ ဘယ်မှာဝယ်တာလဲ ခင်ဗျ..။ red cow peas ရော white eye peas ရော ပေါင်းအိုးနဲ့ပြုတ်ဖူးပြီးပြီ..။ အိုကီတယ်..။ နှစ်ခါမြောက်တုံးကတော့ အနံ့ချဉ်သွားဘူးတယ်..။ ရေမဆေးမိလို့..။ ရေဆေးရမယ်မှန်း သိလို့မဟုတ်ဘူး..။ အနံ့မကောင်းတာနဲ့ဆေးလိုက်တာ အိုကီသွားတာ..။
Nway June 14, 2011 at 1:55 PM
အန်တီဆွိ ပဲကို မပေါင်းခင် အရင်ပြုပ်ရသေးလား။ ထန်းညက်၊ ဆား နဲ့ ဆိုဒါကို ဘယ်အချိန်မှာ ထည့်ရတာလဲရှင့်။
T T Sweet June 14, 2011 at 3:01 PM
မပြုတ်ရပါဘူးမနွေရေ။ ဒါရ်ိုက် ပေါင်းတာပါ။ သုံးခုလုံး စပေါင်းကတည်းကထည့်တယ်ထင်တာပဲ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပိုင်းအစများ ...
ခေတ်သစ် သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်း ...
ကျောင်းတုံးက အမှတ်တရ ...
Artist ဂျူဂျူ မှ မေမေသို့ ...